Imakethi ayinamandla, umrhumo wokudaya wase-Hangzhou Shaoxing
NguJulayi kwaye lelona xesha lishushu kakhulu enyakeni, kwaye ngaphakathi ediniweni nasekugqibezeni umasifundisane wokushicilela wesiNgesi kunye neDyeing Co, eKeqiao Binhai Indawo eNtsha eShaoxing, iqondo lobushushu alikho phezulu ngendlela ebekulindelwe ngayo. ” Imeko imbi kakhulu kunaku-1-3, umatshini uvulekile, alunabushushu kangako kwindawo yokusebenzela ”kunye nomphathi wesebe lemveliso yokushicilela nesiNgesi, uxelele iintatheli ukuba isiphelo sentengiso yasekhaya siphelelwe lixesha ngoku , Iimarike zangaphandle kwaye ngenxa yesizathu soqhushumbo akubanga bikho nto ingcono, ngenxa yoko idayi yendlu iphela iphantsi kakhulu, weva nendlu yedayi yokugxotha abasebenzi nokuba yinyanga enye okanye ezimbini, uxinzelelo lweshishini. " Ukwenzela ukugcina umzi-mveliso ugcina abasebenzi besebenza kwaye bondliwe, umphathi wethu wagqiba kwelokuba anciphise imali yokuhlawula abathengi. ” Umphathi wecala uthe.
Kufundwe ukuba kulo nyaka, ochatshazelwe ngubhubhane, impembelelo kuyo yonke imveliso yelaphu inkulu kakhulu, zonke amakhonkco ngenxa yokunqongophala kweeodolo kunye neshishini lokudumba. Ukushicilela kunye nedaya yokudada kuyafana, ukuvulwa kokunqongophala kwexesha elide, indawo yokugcina izinto zemihla ngemihla ukusuka kwizigidi zeemitha ukuya kuthi ga kumakhulu amabini okanye mathathu amawaka eemitha. Kwimeko enjalo yokungabikho kwee-odolo kangangexesha elide, ezinye iifektri zokucoca udaka, ukuze kugcinwe ukusebenza okusisiseko kukhuphiswano "lokugqithisa", ukugcina abathengi ukuba baphile, kwaye baphile ixesha elide, eyona nto ibalulekileyo kolu shishino lokudaya kulo nyaka. ” Umthamo wethu wemveliso yokuprinta e-Keqiao kunye nendawo yokudibanisa ye-global. Amashishini okushicilela nokudaya apha afaka ngaphezulu kwesiqingatha senani elipheleleyo lokuqhubekisa ukuthumela. Kodwa kwisiqingatha sokuqala salo nyaka, zonke iimarike zaseYurophu nezaseMelika, imakethi yaseMiddle East, kwaye uninzi lweentengiso zase-Afrika zavalwa, ngaphezulu kwesiqingatha semiyalelo yanyamalala, uxinzelelo lungacingelwa, ke ukuhla komrhumo wokudaya kuya into engenakuphepheka. " UWang Wenjun, umphathi jikelele we-Shaoxing English Printa kunye neDyeing Co, LTD, uqikelele waxelela abaxeli: "Imali yodidi lokuqala lwe-2 yuan / imitha inokuba yi-1,3-1,4 yuan / imitha ngoku, umrhumo wokudaya wonyaka xa uthelekiswa nalowo Kunyaka ophelileyo malunga neepesenti ezingama-30. "
Ngokwengxelo yokugqibela yedatha ye-China Association of Printa kunye ne-Dyeing Industry, ukusukela ngoJanuwari ukuya ku-Meyi 2020, iziphumo zokuprinta kunye nokudaya amashishini ngaphezulu kwesikali zifikelele kwi-17,6 yezigidigidi zamamitha, ukwehla konyaka ngonyaka kwe-14,46%. Imeko yokuhanjiswa nokuprintwa kweemveliso zorhwebo iselusizi, kodwa ukuthintela ubhubhane nokulawula imeko e China kulungile. Ngokukhutshwa okuqhubekayo kokusetyenziswa kwasekhaya okunokubakho, imarike yemfuno yasekhaya iyalulama ngokucacileyo, kwaye ukwehla kokuphuma kuJanuwari ukuya ngoMeyi kunciphe ngamanqaku eepesenti ezi-1.40 xa kuthelekiswa nenyanga edlulileyo.
I-Hangzhou Hangmin Damei Dyeing & Finishing Co, LTD., EXiaoshan, Hangzhou, yayine-80-90% yee-odolo zorhwebo lwangaphandle kunye nenani elincinci leeodolo zentengiso yasekhaya ngaphambi kwesibetho. Ekuqaleni kokuqhambuka kobhubhane eYurophu naseMelika ngo-Matshi, Inkampani ihlengahlengise isicwangciso sayo ngexesha elifanelekileyo kwaye yasebenzisa ixesha le-buffer le "xesha lokuqhekeza" lemiyalelo yorhwebo lwangaphandle ukutyhala iqela lonke leshishini ukuba lilisuse Gxila kubathengi bamakhaya. ”UWuhan, njengesiqhelo seTshayina, uvule imakethi yentengiso yasekhaya ukusukela kokuvalwa kwayo ngo-Epreli 8. Senze uhlengahlengiso ngexesha elifanelekileyo ukubamba le nyikima. Ngokuka-Hangzhou hangmin Damei udaya kunye nokugqiba i-Co, LTD. Umlawuli womanejala jikelele uLu Zhongliang udize ukuba inkampani ivule amathuba azinzileyo kulo nyaka, abaphezulu banokufikelela ku-8-9 bangene. Ngaphandle kokuba kwakungekho sithuba ngoFebruwari, ukusebenza ngoMatshi ngokusisiseko bekufana nakunyaka ophelileyo. Zizinto ezizigidi ezingama-92 ezigidi ezenziwe ngendwangu ezenziwe, kuphela iimitha ezimbini okanye ezintathu zemitha ngaphantsi konyaka odlulileyo. Ke ngo-Epreli-Juni wonke, umthamo wemveliso uye wafikelela kuma-60% -70% yexesha lokuphakama kunyaka ophelileyo. U-Lu Zhongliang uthe ukuze andise imakethi yangaphakathi, i-Hangmin Delta ikwenzile ukuncitshiswa okuhambelana nomrhumo wokudaya, ngexabiso elithile lehle nge-5% ukuya kwi-10%. Umrhumo wokuqala wokudaya oyi-3 yuan / imitha uya kuba malunga ne-0,15 yuan. Kwelinye icala, umrhumo wokudaya uza kudluliselwa kubathengi, kwelinye icala, kuya kubakho umahluko kumaxabiso ee-odolo zorhwebo lwangaphakathi nangaphandle.
Xa ujongene nemeko enzima yamazwe aphesheya kunye nokhuphiswano olubi lweemarike, amashishini okudaya e-Hangzhou nase-Shaoxing amkele imigaqo-nkqubo yokuchonga kukhetho ukuze aphumelele abathengi abaninzi, okanye ukudibanisa ubudlelwane phakathi kwabathengi kunye nokusinda kwixesha elingelilo. Ngokuphathelele kwisimo sokushicilela nokudaya kwimarike kwisiqingatha sesibini sonyaka, uWang Wenjun ukholelwa ukuba i-coVID-19 iya kuzisa intshabalalo engacingekiyo kuyo yonke inkqubo yezoqoqosho. Ukuba ubhubhane lwelinye ilizwe lunokulawulwa ngokupheleleyo kwisiqingatha sesibini sonyaka, kusekho ixesha elide lokulungisa ukuba lihambe. Ngokombono wakhe, kukho izinto ezininzi ezingaqinisekanga kwimarike, ngoko ke luhlobo luni lombuso wentengiso yeengubo ezinokuphinda lubuye, akukaziwa. U-Lu Zhongliang ucebise ukuba ushicilelo kunye nokudaya amashishini kwisiqingatha sesibini sonyaka kusafuneka inyathelo ngamanyathelo, utshintsho olusebenzayo ngexesha lokucinga, ngenkuthalo yokwandisa imakethi, bamba imarike yangaphakathi yokuthengisa, qinisekisa uzinzo lwamashishini okuvelisa kuqala, emva koko bafune uphuhliso oluthe kratya.
Ixesha lokuposa: Jul-28-2020